Ị n'anya ọgụ na edinam egwuregwu? Ọfọn, ugbu a ụbọchị android na-aghọ otu nke kasị mma nyiwe maka ịkpọ fọrọ nke nta ụdị ọ bụla nke egwuregwu. The android n'ọma ahịa na-idei mmiri na egwuregwu na niile niches na ebe a bụ ndepụta nke kasị mma 20 android ọgụ egwuregwu na dị oké ọnụ ahịa na-agbalị.
1. Mkpụrụ Obi Calibur
Mkpụrụ obi calibur bụ otu n'ime n'elu gosiri azụmahịa egwuregwu n'ihi na Android. Egwuregwu na-enye gị 3D ọgụ ahụmahụ na nza nke spellbinding ndịna-emeputa kwa. Ị nwere ike ma na-egwu site a akụkọ akara ma ọ bụ na-eji oge agha ịhụ otú ngwa ngwa ị bụ.
Nke a bụ ihe dị egwu egwuregwu n'ihi na robotics ndị hụrụ. N'adịghị ka ndị ọzọ egwuregwu ebe katuunu, na-atọ ọchị ma ọ bụ ụmụ mmadụ na-agụ akụkọ na-eji, n'ezie na nchara, site ịdabere nnukwu ntụrụndụ na-enye gị ohere itinye robots ule. The egwuregwu na-aga maka $0.99 on google play ụlọ ahịa na-agba ọsọ na android ngwaọrụ. E nwere ihe karịrị 50 robots ịhọrọ site na-emeputa bụ bụghị ihe ọjọọ mgbe niile.
3. Real Steel agbachitere
A bụ ihe ọzọ variant nke ezigbo nchara, si n'otu ụlọ ọrụ ma n'adịghị ezigbo nchara, egwuregwu a bụ maka free download. E nwere ihe abụọ nsụgharị nke egwuregwu a na i nwere ike ịhụ ha na-adabere nnukwu ntụrụndụ homepage.
4. Way nke Dogg
Way nke Dogg bụ a zuru okè egwuregwu maka geeks na ndị hụrụ nke nkasi. Egwuregwu na-eji na-atọ ọchị ịke ndịna-emeputa na ọ na-nwere a dị iche iche obibia Ịgba Cha Cha njikwa. Ka ihe atụ, kama nke mbụ buttons na-enwe na-akpalite otu ihe, ị ga-enweta na swipe a ụkpụrụ na ihuenyo iji nweta ihe N'ihi chọrọ.
5. Ọbara na ebube
Ọ bụrụ na ị n'ime The Epic fim, ị ga-n'anya-akpọ ọbara na ebube ebe egwuregwu adopts na gladiator ịke ọgụ. Egwuregwu bụ free maka download on google play ụlọ ahịa. Ọ na-eji ma ịsụ na ịgba ọhịa na swipe arụzi ụgbọala na ọ na-abịa na egwu ndịna-emeputa kwa.
6. Taekwondo Game Global ndorondoro
Dị ka aha-atụ aro, egwuregwu a adopts na karat ịke nke ọgụ. Egwuregwu n'ụzọ zuru ezu na-adabere ná mberede kicks na punches ka megide combos nke dị ike na-efega iji na-enye ya a ezi obi na-adị nke taekwondo. Egwuregwu dị ma na android na iTunes.
7. na-alụ ọgụ tiger- emesapụ
Alụ ọgụ tiger - emesapụ aka bụ oké egwuregwu maka gamers na-ahụ n'anya nke adrenaline rosh. Ị na-egwu egwuregwu site na-alụ ọgụ anya na-emegide na-abịa n'ebe ị. Egwuregwu incorporates ihuenyo njikwa na ụfọdụ bụ isi na-arụzi ụgbọala.
8. iju Kọntestị nke agbachitere
Ịtụnanya zoo nke ndị mmeri, nke dị ma na android na iTunes, bụ ihe ọzọ na-atọ ọchị themed egwuregwu. Egwuregwu bụ ikpe mmụọ nsọ site ịtụnanya na-atọ ọchị Obere-usoro ma ọ na-enye ohere gamer wuo agbachitere site etoju.
9. Hockey agha pro
Ọ bụla hockey n'anya ga-nnọọ a n'anya egwuregwu. Ị nwere ike tinye tournaments na itinye aka n'elu itoolu hockey Player n'ụwa nile. I nwekwara ike tinye a otu na otu mode na a mma ọkpụkpọ iji mma gị na nkà. Nke a bụ egwuregwu dị ma na iTunes na google play ụlọ ahịa.
10. Mark nke Wolves
Nke a bụ ihe kacha ọgụ egwuregwu n'ihi na ihe ndị hụrụ. Mark nke anụ ọhịa wolf nwere mgbagwoju njikwa na-pụtara inye nkenke, bụ ihe na-esi ike imeta on a touchscreen. Ị nwere ike ịhụ na ọ na google play ma ọ bụ iTunes.
11. Ọjọọ: Gods n'etiti anyị
Ikpe na-ezighị: Gods n'etiti anyị bụ a keukwu collection nke ọkacha mmasị gị dike na villains. Nke a na-enye gị ohere iji bulie ọkacha mmasị gị dike / villain buso ndị ọzọ dike / villains. Ị nwere ike iru gị onwe gị otu na ibà ọgụ na a 3 site 3 duel.
12. The Eze nke alụso '98
Egwuregwu a bụ ihe kasị mma ghota maka ochie akwụkwọ gamers. Ọ na-abịa ochie akwụkwọ ndịna-emeputa na 2D na ọ na-eji ochie Arcade usoro Ebe e si nweta. Egwuregwu na-abịa zuru ezu na 38 dị iche iche na-agụ akụkọ na i nwere ike ịhọrọ site na.
13. Punch dike
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obere bit okike na gị agwa, mgbe ahụ, Punch dike bụ nri egwuregwu n'ihi na gị. Ị na-nnwere onwe gbanwee uma anya dị ka ị chọrọ eg agbakwunye ntutu agba, ajị ihu, wdg Ị nwere ike n'ezie incoprate ezigbo ihu nke bụ ihe dị egwu mma ma ọ bụrụ na i mgbe niile chọrọ iweso gị iwe kwupụta mmadụ.
Real ọkpọ bụ achọghị ịzụ kasị mma free ọgụ egwuregwu na google play ụlọ ahịa. Dị ka aha na-atụ aro, egwuregwu bụ ihe niile banyere ọkpọ. The egwuregwu nwere ọtụtụ mode na-enye gị na-egwu ndị ọzọ na online Player na ozugbo.
15. agbọpụta Ọgụ 2
Nke a bụ ihe nke igbe ụdị egwuregwu n'echiche bụ na ị na-adịghị n'ezie nwere odide ma silhouettes nke otu N'ihi ya aha, onyinyo agha. Otú ọ dị, silhouettes adịghị pụtara egwuregwu ga-agwụ ike ebe ọ bụ na arena bụ na 2D ndịna.
16. ọkpọ ịlụ ọgụ
Egwuregwu a nwere ike kọwara dị a ọkpọ egwuregwu na a nzube. Nke ahụ bụ n'ihi na onye ọ bụla nke dị odide nwere kpọmkwem ihe mere ha na-ọkpọ-emegide ha. Ị ga-ahọrọ si 12 odide, 5 Arenas niile nke na-adade ke egwu 3D ndịna-emeputa.
17. TNA mgba Mmetụta
TNA mgba mmetụta na-adọta n'ike mmụọ nsọ si ezigbo TNA mgba agbachitere. Ị nwere ike ịhọrọ site na a ọnụ ọgụgụ nke odide dị ka Hulk hogan anyị, Ọgbụgba, Van oche wdg Otú ọ dị, egwuregwu na-enye gị ike gị fictional TNA dike.
18. mgbe ebighị ebi Warriors 2
Nke a bụ egwuregwu ga-amasị ndị hụrụ The Epic akụkọ. Na a nutshell, ọ bụ a akụkọ nke a mmụọ ọjọọ na-ebibi ala ma warrior ọgụ na-mmụọ ọjọọ ke n'ọnụ mmiri. Ọ bụrụ na ị na-achọ a na-akpali akpali egwuregwu mgbe ahụ na nke a bụ ezi nhọrọ.
Na na a ohere chọrọ 2GB, ọhịa ọbara na-enye gị otu ahụmahụ nke egwu 3 D ndịna-emeputa na nza nke The Epic combats. Na a nutshell, egwuregwu bụ akụkọ nke Lancelot bụ onye na a ozi ebịne Eze Arthur ma ndị ọjọọ dibịa afa.
20. SWAT sinipa Anti-eyi ọha egwu
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya otú snipers-ewepụ zaa, mgbe ahụ, nke a bụ egwuregwu maka gị! The ozi bụ mfe iji nweta hostages n'ebe ndị dọọrọ ha n'agha. Ma adịghị duhiere aha nke egwuregwu na-eche echiche a sniper égbè bụ ihe niile ị ga-have- ị ga-enwe nza nke ndị ọzọ na ngwá mezue ozi.
> Resource> emulator> Best 20 Android na-alụ ọgụ Games